Madaxweyne Farmaajo oo codsaday inuu la kulmo Guddoomiye Jawaari – Madal Furan
Hoy > Warka > Madaxweyne Farmaajo oo codsaday inuu la kulmo Guddoomiye Jawaari
Madaxweyne Farmaajo oo codsaday inuu la kulmo Guddoomiye Jawaari
Editor April 8, 2018 Warka 0
Muqdisho (Madal Furan) Wararka laga helayo xarunta Madaxtooyada Villa Somaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay uu jiray kulamo u dhexeeyey Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo iyo Xildhibaano kale oo socday dhinaca Guddoomiye Jawaari.
Warku wuxuu intaas ku darayaa in kulamadan bilowga ahi ay muujiyeen waxoogaa horumar ah oo laga sameeyey khilaafkii u dhexeeyey Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya iyadoo la soo sheegayo in Guddoomiye Jawaari uu ku adkeysanayo in Mooshinka ka dhanka ah laga dhigo mid codkiisu sir yahay.
Xoggo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya Madaxweyne Farmaajo uu si weyn u soo dhoweeyey dadaalka Xildhibaanadu ay wadaan, iyadoo lagu soo waramayo in Xildhibaano kale oo horayba dhexdhexaad uga ahaa xiisaddan siyaasadeed ay iminka ku biireen barnaamijka dhexdhexaadinta ah ee Xildhibaanada Jawaari taageerrsan ay wadaan.
Inkasta oo aan si dhab loo ogeyn natiijooyinka ka soo baxaya kulamadan oo albaabadu u xirnaayeen ayaa hadda ilo lagu kalsoon yahay sheegayaan in Madaxweyne Farmaajo uu ka dalbaday Xildhibaanadii u tegay in ay wada kulmaan Guddoomiye Jawaari.
Guddoomiye Jawaari ayaa horay ugu eedeeyey Madaxweyne Farmaajo inuu ka codsaday inuu is casilo iyo in Xukuumadiisu ay dhinac kaga jirto mooshinka xil ka qaadista ah ee lala damacsan yahay.
Haddii ay suurtagal noqoto inay wada kulmaan Madaxweyne Farmaajo iyo Guddoomiye Jawaari ayaa la isweydiinayaa waxa ka soo bixi kara?
Guddoomiye Jawaari ayaa Xildhibaanada ka socdaa la xaqiijiyey inay Madaxweyne Farmaajo u sheegeen Laba qodob midkood inuu yeelo 1. In codka kalsoonida ee loo qaadayo Guddoomiye Jawaari in laga dhigo mid qarsoodi ah 2. In la joojiyo mooshinka ka dhanka ah Guddoomiye Jawaari xaaladda Baarlamaankana sidii caadiga aheyd dib loogu soo celiyo.
Lama oga go’aanka uu qaadan doono Madaxweyne Farmaajo, balse waxaa jira cadaadis xoog leh oo ka imaanaya Beesha Caalamka.
Puntland oo ka hor timid Guddiga Wada hadalada Soomaaliya iyo maamulka Somalind.
Afar arrimood dartood ooTuulo ku taal Kenya looga mamnuucay cunista Qaadka
Tirada dhimashada Qarax ka dhacay Kabul oo 90 kor u dhaaftay